खगेन्द्र संग्रौलाको विवादास्पद भाषण ः संविधान नश्लवादी र अपराधिक दस्तावेज ! पहाडी मर्दा मात्रै समाचार लेख्छन् मिडिया - Sainokhabar
होमपेज / प्रदेश / गण्डकी प्रदेश / खगेन्द्र संग्रौलाको विवादास्पद भाषण ः संविधान नश्लवादी र अपराधिक दस्तावेज ! पहाडी मर्दा मात्रै समाचार लेख्छन् मिडिया
खगेन्द्र संग्रौलाको विवादास्पद भाषण ः संविधान नश्लवादी र अपराधिक दस्तावेज ! पहाडी मर्दा मात्रै समाचार लेख्छन् मिडिया
मङ्गलबार, पुष १०, २०७५ , साइनो खबर
काठमाडौं । लेखक तथा स्तम्भकार खगेन्द्र संग्रौलाले नेपालको संविधानको कटु आलोचना गर्दै यसलाई ‘नश्लवादी’ र ‘आपराधिक’ संज्ञा दिएका छन् । उनले अहिलेको संविधान खस आर्यहरुले बनाएको र देशको आधा जनसख्या सविधानमा असन्तुष्ट भएकोसमेत दावी गरे ।
पोखरामा आयोजित साहित्य सम्मेलनका क्रममा संग्रौलाले ‘म यसकारण राष्ट्रवादी होइन’ शिर्षकमा करिब आधा घन्टा बोलेका थिए । त्यस क्रममा उनले राष्ट्रवादको चिन्तनमाथि प्रहार गरे । नेपालका मिडियाहरु पनि नश्लवादी भएको दावी गरे । पृथ्वीनारायण शाहले गरेको राष्ट्र एकीकरणमा समेत खिसिट्यूरी गरे । संग्रौलाको विवादास्पद भाषणको सम्पादित अंश ः
संविधान निर्माण प्रक्रियाको चर्चा गरौं । संविधान कसरी बन्यो ? एउटा जात वा नश्लले अर्काे समुदायमाथि हिंसा थोपर्दै, मान्छे मार्दै, रगतको खोलो बगाउँदै संविधान बनाएको होइन ? अन्तरिम संविधानको विधी–प्रक्रिया उल्लंघन गरेर फास्ट ट्रयाक भन्दै ज्यादतिको बीचमा संविधान बनाइएको होइन ? टिकापुर घटना घट्यो । टिकापुरको त्यो भूगोलमा अखण्डको नारा थियो । एउटा नश्लले अखण्डको नारा लगायो । त्यो पृष्ठभूमिमा टिकापुरमा हिंसा भयो र केही प्रहरी अफिसर, एक बालक मारिए । उनीहरु सबै पहाडी थिए । त्यसपछि थारु समुदायमाथि राज्यले जघन्य हिंसा थोर्पयो । पसल लुटिए । घरमा आगो लगाइयो । महिलाहरुमाथि दमन भयो ।
शीतलनिवासमा अहिले कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यले राज गर्नुभएको छ । राजतन्त्रका राजाभन्दा राष्ट्रपति केही फरक छैन । धर्मनिरपेक्ष देशमा राष्ट्रपति हिन्दू चाडपर्वमा मन्दिरको दर्शन गर्दै हिँड्छिन् । के यही हो धर्मनिरपेक्षता ? मेरा नेता पुष्पकमल दाहाल थिए । निर्वाचनमा उनलाई जिताउन सडकमा हिँडेको थिएँ । तर, तीनै पुष्पकल ओलीमा विलय भए ।
राष्टवाद गणतन्त्रविरोधी, नश्लवादी, समाजवादविरोधी, असमावेशी छ । त्यसैले माफ गर्नुहोला म चाहिँ राष्ट्रवादी होइन । अनलाइनखबर